Shiinaha XY-4311G ahama ahama-birta tolmo wanaagsan Birta soo saaridda iyo Warshad | Shuolong
XY-4311G ahama Steel-xidhkii Birta Fabric
XY-4311G- mesh birta loo isticmaalo sida facade, kaliya ma ciyaaraan doorka qurxinta, sidoo kale waxay isticmaali kartaa aagga furitaanka mesh biraha dhismaha si loo joojiyo qayb ka mid ah qorraxda.
Waxyaabaha: ahama Steel & Copper
Miisaanka: 8.54kgs / m2
Aagga Furitaanka: 64.5%
Mesh dhumucdiisuna: 10mm
Daaweynta Dusha sare: PVD
Baaxadda ugu Weyn: 1.5m
Muddada ugu badan: 3m
Muddada ugu badan: 4m
Naqshado badan iyo ka badan ayaa doorta mesh biraha oo ah cunsur muhiim u ah qaabeynta qaabdhismeedkooda, maxaa yeelay mesh birta ah ayaa ballaarin kara naqshadooda. Qaabka mesh birta keligiis maahan, waxaana loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida mashruuc kasta oo naqshadeyn ah. Muhiimad ahaan, naqshadeynta ayaa looga golleeyahay in laga dhigo mowduuca naqshadeynta qurux iyo wax ku ool ah. Mesh birta dhismaha ayaa sameyn karta.
Hufnaanta mesh dhismaha waxay bixisaa hawo dabiici ah. Waxaan awood u leenahay inaanu u habeynno aagga furan ee mesh-kaaga aad dooratay si markaa loo gaaro shuruudaha mashruucyada gaarka u ah ee hawo-qaadashada. Mesh Architectural wuxuu bixiyaa difaac qorraxda oo wax ku ool ah; sifeynta qorraxda iyo yareynta kuleylka dhismaha dhexdiisa si weyn.
Waxaa intaa dheer, haddii aad u baahan tahay inaad ku darto waxyaabo naqshadeynta mesh birta ah mashaariicdaada socda ama soo socota, fadlan si toos ah noola soo xiriir. Marka lagu daro alaab tayo sare leh iyo qiimaha ugu fiican, waxaan sidoo kale bixin karnaaadeegyada loo habeeyay iyo xalka rakibaadda barnaamijyadaada.
Waxaan kuu soo bandhigi karnaa qalab ku habboon hadba baahida mashruucaaga. Hadday tahay tareen toosan ama tareen qalloocan oo qalooca leh, ShuoLong ayaa kaa caawin kara inaad xaqiiqsato. Dhumucda qalabka aan ku siineyno waa ugu yaraan 2mm, nolosha adeegguna waa sii dheereysaa. Haddii aad wali su'aalo ka qabtid nidaamka rakibaadda, fadlan haka waaban inaad nala soo xiriirto, waxaan ku siin doonaa fiidiyoow rakib ah oo faahfaahsan si aad uga jawaabto shakigaaga.
1) Kumbiyuutar kasta oo ku duubaya warqad, 1-5 kumbuyuutar oo ku jira sanduuq alwaax ah;
Khibrad Sanadeed 1.40: In ka badan 40 sano waayo-aragnimo wax soo saarka mesh silig.
3. Adeeg Gaaban: Noocyada noo jira ka sokow, waxaan sidoo kale u habeyn karnaa baahiyahaaga naqshadeynta
Qiimaha 4.Best Waxaan is waafajin doonaa muunad kasta ama wakiillada ay ku siiyaan shirkadaha kale. Si aan uga faa'iideysano ballanqaadkeenna qiimaha ayaa si fudud noogu soo dir oraah qoran shirkad kale waxaanna ku garaaci doonnaa sicirkooda ugu yaraan 10%
Haddii aad rabto inaad dhigto amarka ama aad u baahan tahay inaad ogaato faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan mesh birteenna ah, fadlan farriintaada ugu soo dir degelkeenna, na soo wac ama email noo soo dir. Wwaxaan kuugu jawaabi doonaa 24 saacadood gudahood!
Hore: XY-4356 Mashiinka Mashiinka Birta ah ee Dhismayaasha ah
Xiga: XY-4311 Birta Mesh Shaashadda Dhismaha Wajiga
XY-A1283 Birta Birta loogu talagalay Xirmooyinka Dhismaha Xafiiska
XY-3831 Birta Mesh Shaashadda
XY-A2412B Mid-Hooska Goynta Birta mesh
XY-A5016 Qorraxda Isku dhejinta Birta oo Adag
XY-4356 ahama Steel Wire mesh for Public Bu ...